Apache OpenMeetings 5.0, nhọrọ magburu onwe ya iji mepụta nkesa ogbako gị | Site na Linux
Apache OpenMeetings 5.0, nhọrọ magburu onwe ya iji mepụta nkesa ogbako gị
La Apache Software Foundation kwupụtara ntọhapụ Ihe nkesa nzuko weebụ Apache Oge 5.0, nke na-enye ohere ịhazi ihes nzukọ ọdịyo na vidiyo site na weebụ na nke webinars abụọ na otu ọkà okwu na nzukọ na ọnụọgụ aka ike nke ndị sonyere na-emekọrịta onwe ha.
Ọzọkwas, enyere ngwaọrụ iji jikọta ndị na-ahazi kalenda, zipu nkwuputa na onye obula ma obu mgbasa ozi ohuru, kesaa faịlụ na dọkụmentị, jigide akwụkwọ adreesị nke ndị sonyere, debe usoro ihe omume, hazie ọrụ ọnụ, kesaa nsonaazụ nke ngwa ndị ebuputere (ngosi ngosi ngosi), mee ntuli aka na nyocha.
Otu nkesa nwere ike ijikwa ọnụ ọgụgụ aka ike nke nzukọ emere n'ime ụlọ nzukọ ọgbakọ dị iche iche yana gụnyere ndị nke gị.
N'ime njirimara ndị bụ isi nke pụtara na OpenMeetings, bụ:
Na-enye ohere mgbasa ozi nke Video na Audio
Enwere ike ilele desktọpụ onye ọ bụla
Ọ dị n’asụsụ iri na itoolu
Mpempe akwụkwọ nke mebere nke nwere ikike maka ịse, ide ihe, edezi, ịcha na ịgafe, imegharị onyonyo na itinye akara.
Ọmụmụ ihe mgbe ị na-ese (4 × 4 ma ọ bụ 1xn modus)
Akwụkwọ mbubata (.tga, .xcf, .wpg, .txt, .ico, .ttf, .pcd, .pcds, .ps, .psd, .tiff, .bmp, .svg, .dpx, .exr ,. jpg, .jpeg, .gif, .png, .ppt, .odp, .odt, .sxw, .wpd, .doc, .rtf, .txt, .ods, .sxc, .xls, .sxi, .pdf)
Izipu akwụkwọ ịkpọ oku na njikọta kpọmkwem n’ime ọgbakọ a
Usoro njikwa oge
Ime ụlọ na nkeonwe maka nzukọ
Ihe nkesa ahụ nwere ike ịgba ọsọ na Windows na Linux na ndị ahịa chọrọ naanị ihe nchọgharị na Flash Player ka ha nwee ike isonye na nnọkọ site na ikpo okwu ọ bụla
O nwere modul maka ijiko ya na Moodle
Ihe nkesa na-akwado ngwaọrụ njikwa ikike mgbanwe na usoro nhazi ogbako siri ike. A na-achịkwa ndị sonyere ma na-emekọrịta site na ntanetị. Edere koodu OpenMeetings na Java. MySQL na PostgreSQL nwere ike iji DBMS.
1 Banyere ụdị ọhụrụ nke OpenMeetings 5.0
2 Esi nweta Apache OpenMeetings 5.0?
Banyere ụdị ọhụrụ nke OpenMeetings 5.0
Ọhụrụ a version, na ndozi iji hazie oku ọdịyo na vidiyoNakwa iji nye ohere na ihuenyo ahụ, a na-eji usoro WebRTC. Cre-engineered components for sharing microphones na kamera weebụ, screencasting, playback na video ndekọ na iji HTML5. Chọkwaghị ịwụnye nkwụnye Flash.
A na-emegharị interface maka njikwa site na ihuenyo mmetụ na ọ na-arụ ọrụ na mobile ngwaọrụ na mbadamba.
Mgbanwe ọzọ nke pụtara ìhè bụ na agbakwunyere nkwado maka izipu njikọ kpọmkwem ịbanye ụlọ nkwụsịtụ nke na-eji aha ihe atụ nke ụlọ ahụ kama iji nọmba ọnụọgụ.
Agbakwunyere nkwado maka edezi avata ọrụ (Admin-> Ọrụ).
Ejirila ụlọ akwụkwọ dị iche iche gụnyere nsụgharị ndị ọhụrụ. Ewelitela ụdị nsụgharị Java ka ọ bụrụ Java 11.
E tinyela iwu CSP (Iwu Ndozi Ọdịnaya) siri ike karị iji kpuchido ngbanwe nke koodu onye ọzọ.
Ezochiri ozi banyere akaụntụ na email nke ndị ọrụ.
A na-eji usoro weebụ nke Apache Wicket 9.0.0 iji hazie interface weebụ ma nyefee ozi na oge na-eji WebSockets protocol na ozugbo mgbanwe nke igwefoto mkpebi na-nyere, n'ihu igwefoto na-nyeere na ndabara maka video gụgharia.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ntọhapụ nke nsụgharị ọhụrụ a, ị nwere ike ịlele nkọwa n'ime ọkwa ọkwa. Njikọ bụ nke a.
Esi nweta Apache OpenMeetings 5.0?
N'ikpeazụ, maka ndị nwere mmasị ịnweta ụdị ọhụrụ a, nwere ike ịga na ukara website nke oru ngo na ngalaba nbudata ya ị nwere ike ịchọta nchịkọta ọnụọgụ abụọ, yana koodu maka nchịkọta ha ma ọ bụ ihe oyiyi Docker dị njikere.
N'ihe banyere ndị na-eji Arch Linux na ndị nkwekọrịta, ha nwere ike ịchọta ngwugwu ahụ dị njikere na AUR.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Apache OpenMeetings 5.0, nhọrọ magburu onwe ya iji mepụta nkesa ogbako gị
Metisse, Musca, MWM, OpenBox na PekWM: WM ndị ọzọ maka Linux